कालेकाले मिलेर खाउ भाले भने जस्तो हुन दिन्न : उपप्रमुख खड्गी — Himali Sanchar
काठमाडौंको खुलामञ्च जस्तो नेपाली राजनीतिक इतिहासको प्रत्यक्ष साक्षी समेत बेचिए पछि बारम्बार विवादमा आउने काठमाडौं महानगरपालिका थप विवादमा तानिएको छ । काम भन्दा बढी विवादमा रमाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादको शिकार रानीपोखरीको पुनर्निर्माण बनिरहदाँ अर्को विवाद थपिएको छ खुलामञ्च ।
खुलामञ्चमा कसरी धमाधम सटरहरु निर्माण भए र त्यस्को भाडा उठाएर करोडौंमा रमिता गरियो यो खबर बारे अचम्म प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी दुबै बेखबर छन् । यतिखेर उपप्रमुख खड्की प्रत्येक पाइलामा प्रमुख शाक्यको दोष देख्नु हुन्छ । उता प्रमुख शाक्य भने शतप्रतिशत उपप्रमुख खड्कीको दोष देख्नु हुन्छ ।
उपप्रमुख खड्की भने खुलामञ्च प्रकरणमा आगो नै ओकल्न थाल्नु भएको छ भने आइतबार आफ्नो आक्रोशको उग्ररुप पेश हुने तर्क गर्नु हुन्छ । न्यूज २४ नेपालका लागि कृष्णकुमारी चौलागाईले गरेको कुराकानी :
खुल्ला मञ्चको जग्गामा सटर निर्माण गरेर बिक्री भयो, यस विषयमा तपाईहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो कि मौन हुनुभएको हो ?
खुल्ला मञ्च खुल्ला रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । खुल्ला मञ्चसंग हाम्रो ऐतिहासिक अध्यायहरु जोडिएको छ । त्यसमा सटर बन्नु र बिक्री हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हुदैँ होइन् । वास्तवमा खुल्ला मञ्चको विषयमा म मौन बसेको होइन । यो मेरो टोलमा नै पर्ने भएकोले यहाँको स्थानीयले भनेपछि मैले थाहा पाए । आधिकारिक रुपमा बुझ्ने वित्तिकै नगर समितिको बैठकमा मेयर ज्यूसंग यस विषयमा मैले नै कुरा राखेको हुँ । अब यस्लाई मौन भन्न मिल्छ ।
मेयर ज्यूले खुल्ला मञ्चको जग्गामा तपाईले नै राजनीति गर्नुभयो भन्नुभएको छ नि ?
मैले खुल्ला मञ्चमा राजनीति किन गर्ने ? मलाई आवश्यकता भएको कुरा पनि होईन । अब यस विषयमा मैले कुरा उठाउँदा यसमा राजनीति गरेको भए सो विषय किन उठाउथे । मलाई ज्ञापन पत्र दिनुपर्यो भनेर फोन आयो, भीसेनदास सिंहको, मलाई ज्ञापन पत्र दिने कुरा हुनुभन्दा पहिला मेयर ज्यू संग कुरा हुँदा उप मेयरलाई दिनु भन्नु भएको रहेछ ।
जनतासहित आएको त्यो जुलुसको अगाडि म गएको हो, ज्ञापन पत्र लिएपछि आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राखेको हो । त्यति खेर मैले मनोज भेटवालले त्यतिकै सटर राखेको होईन, उसलाई ग्रिन सिंगन्ल दिने अरु कोही छ भनेको हो । त्यसमा मैले मेयेर ज्युलाई इंिगत गरेको छैन ।
जबसम्म जनताले यो विषय उठाएन त्यतिबेलासम्म महानगर मौन रह्यो नि होइनर ? आफ्नो नगर भित्र अवैधानिक काम भएको छ भन्ने यहाँहरुलाई थाहा नभएको नै हो र ?
नगर परिषद् हुनु एक दिन अगावै चैत्र २३ गते मेरो टोलवासीले धमाधम सटर निर्माण भएको छ भन्ने कुरा आएपछि मैले आफ्नो मातहतका मानिसहरु पठाए त्यसपछि आधिकारिक रुपमा पुष्टि भयो । भोलिपल्ट नगरसभामा मैले मेयरसाबलाई सो कुरा भने, रत्नपार्क एरियामा राखिएको पसलहरुको कारण अपराध तथा विक्री बढीरहेको छ ।
झन् अर्को सटर तथा पसलहरु राखिएपछि नगरपालिको सौन्दर्य पनि बिग्रिने भयो । त्यहाँ सटर राख्नलाई कस्ले आधिकारिकता कस्ले दियो भन्ने प्रश्न उठाउदा उल्टो मेयर ज्यूले मलाई तपाई अनुगमनमा गएर मलाई रिपोर्ट नबुझाउने भन्नुभयो । अरु केही माग्नु भएन् । आधिकारिक रुपमा मलाई केही माग्नु भएन ।
केहीदिन पछि म भारतको नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रम थियो, ५ गतेमात्र फर्किए । त्यति खेरपनि मैले खुल्लामञ्चको जग्गाको विषय उठेको छ, भन्दा उहाँले फोनमा नै तपाई अनुगमन समूहको संयोजक हो, तपाई गएर यस्सो अनुगमन गर्नुहोस् र प्रतिवेदन पेश गर्नुहोस् न भन्नुभयो ।
त्यसलाई आधिकारिक भन्न मिल्दैन नि, म पनि एउटा उपमेयर होनि, मेरो पदलाई उहाँले बुझ्नु पर्यो नि । यसो गर त्यसो गर भन्नलाई म पिउन त होइन, आधिकारिक रुपमा चिठ्ठी पठाउनु पर्यो नि । अस्ति फोनमा भनेको कुरा आज पठाए जस्तै अस्ति चिठ्ठी पठाउनु पथ्र्यो नि । कानुनी रुपमा अनुगमन समितिमा के के हुन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्यो नि मेयर साबलाई ।
कानुनी रुपमा अनुगमनको जिम्मा तपाई माथि नै छ नि ?
कानुनी रुपमा अनुगमनको जिम्मा मेरो हो । अनुगमन भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र वडा कार्यालयको बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ सहकारी, एनजिओ, स्वास्थ्य, शिक्षाको विषय हेर्ने हो । यो विषयको अनुगमनको लागि मेयर सावले मलाई आधिकारीक रुपमा पठाउनु पर्छ ।
अब डोजर चलाईन्छ भन्नु भएको छ नि ?
हो, उस्लाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिने र हटाएन भने डोजर चलाउने हो । आज मेयर ज्यूले भन्नुभयो मैले यो विषय हिजै भनेको हुँ । खुल्लामञ्चलाई खुल्ला नै छाड्न पर्छ । अब मेयर र उपमेयर मिलेर काम गर्नु पर्छ । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नु भएन ।
भेटवाल समुहले त सटर निर्माणको लागि सम्झौता भएको छ भन्छ नि ?
हो उनीहरु संग सम्झौता भएको हो । तर उनीहरुसंग सम्झौतामा सटर निर्माणको लागि पनि प्रावधान राखिएको छ । सम्झौतामा ५, ६ ओटा सटर राख्न पाउने भन्ने छ । त्यसमा पनि काउन्टर, फार्मेसी, चमेना गृह, सार्वजनिक शैचालय राख्ने कुरा भएको हो । तर मनलागी रुपमा सटर निर्माण गर त भनेको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच २२ फागुन २०७१ मा भ्यू टावर निर्माणसम्बन्धि काम भए पनि काम अर्कै हुँदा महानगर चुपचाप बस्नुले महानगर तथा जनप्रतिनिधिको पनि मिलेमत्तो छ भन्ने देखिदैन र ?
हो, कुरा यहाँनेर आएको छ, २०७१ सालमा सम्झौता भएको कम्पनीले यस अघि किन सटर निर्माण गरेन । चाहेको भए त उसले यस अघि नै सटर बनाएर बेच्न सक्थ्यो नि । अहिले आएर कस्ले अनुमति दियो । त्यहाँ पसल खडा गर्नको लागि ग्रिन सिंग्नल दियो । भेटवाल समुहलाई म दोषी देख्दिन, बसी बसी करौडौँ आउछ भने त गर्ने नै भयो । त्यसमा ग्रीन सिंग्नल दिने मान्छे दोषी हो ।
महानगरले अवैधानिक सटर भएको र हटाउछौँ भन्दा पनि कम्पनीको अटेरीपनाले महानगर भन्दा पनि शक्तिशाली त कम्पनी देखियो नि होइन् र ?
महानगर चुपचाप बसेपछि त उ शक्तिशाली देखिने नै भयो नि । आज मेयर सावले मलाई दोष लगाउनु भयो । यसअघि मेरो टोलको मान्छेले मलाई आएर भने, मेयर सावलाई पनि कसैले भनेन होला र ? उहाँ चुप लाग्नुको कारण के त ? उहाँले मलाई दोष लगाउनु हुन्छ भने दोष लगाउनु मेरो पनि बाध्यता हो । भेटवाल समूहलाई कसैले ग्रीन सिंग्नल दिएको छ र उ चुप छ ।काले काले मिलेर खाउ भाले भन्ने नियतले कसैले काम गरेको छ भने त्यो सपना तुहिन्छ ।
रानीपोखरी पुननिर्माणमा पनि मेयर र तपाईबीच टकरावअहिले पनि उस्तै आखिर बेलाबेलामा यस्तो टकाराव आइरहनुको कारण चै के हो ?
आफु खुसी काम गरेपछि विवाद त आउने नै भयो नि । उहाँको आफु खुसीले महानगर कहाँ चल्छ । उहाँले मलाई राजनीति गर्यो भन्ने आरोप लगाउनु हुन्छ ।उहाँले जे गल्ती गरे पनि चुप लागेर बसे भने म उपप्रमुख भएको के काम । मैले वैधानिक र राम्रो संग कम गरौँ भन्दा राजनीति गर्यो भन्न मिल्छ । केही सूचना नदिने कहाँ हुन्छ ।
खुल्ला मञ्चको विषयमा यतिधेरै चर्चा भएको छ, अबको महानगरको काम के हुनेछ ?
आधिकारिक रुपमा मलाई चिठ्ठी आएको छ, अब मैले अनुगमन गर्छु । मैले आइतबारको बैठक बोलाएको छु । अनुगमन टोली कानुनका विज्ञ व्यक्तिहरु बसेर बैठक बसेर भ्याएसम्म फिल्डमा सबैजनाई लिएर जाने छु । हामी भेटवाल समुहलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिन्छौँ । सो समयमा उनीहरु आफै भत्कायो भने भत्कायो नत्र महानगरले डोजर नै चलाउछ । यसमा दुइमत छैन ।